एउटै मञ्चमा आमनेसामने भएर कुरा गर्दै प्रचण्ड–बाबुराम « News24 : Premium News Channel
एउटै मञ्चमा आमनेसामने भएर कुरा गर्दै प्रचण्ड–बाबुराम
काठमाडौं, १ फागुन । पार्टीबाट अलग भएको लामो समयपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पुनः एकचोटी एउटै मञ्चमा आमनेसामने भएर कुरा गर्ने भएका छन् ।
फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर डा. भट्टराईले ल्याएको कृति ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ मा तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डरसमेत रहेका प्रचण्डलाई प्रमुख वक्ताका रुपमा आमन्त्रण गरेसँगै उनीहरुबीच विविध विषयमा आमनेसामने भएर कुरा हुने जनाइएको छ ।
गत पुष ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त असंवैधानिक कदमविरुद्ध बुलन्द आवाज चर्किएरहेको बेला उनीहरुबीचको साहित्यिक भेटलाई विशेष अर्थका रुपमा हेरिएको छ ।
बालुवाटारस्थित एक पार्टी प्यालेसमा दिउँसो १ बजे राखिएको विमोचन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि आमन्त्रणा गरिएको छ । यसैगरी कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई तथा डा. मीना पौडेल र डा. अरुण गुप्तोले पनि पुस्तकबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा भट्टराईको कृति ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो । यसअघि पत्रकार अनिल थापाद्वारा लिखित बाबुरामबारेकाे किताब ‘अविराम बाबुराम’ ले बजारमा लोकप्रियता कमाएको थियाे ।